Singapore - idolobha iphupho. Kuthiwa yayakhiwe ngokunamathela yonke imithetho futhi izimiso nezimfundiso Chinese Feng Shui. Akumangazi ukuthi le ndawo esichumayo, abantu bayo - abantu yimpumelelo nazi izindlu omuhle nezimoto bengekho nhlobo, inkohlakalo nobugebengu. Singapore itholakala engxenyeni eseningizimu-mpumalanga ye-Asia, eduze nenkabazwe. Unyaka wonke ashisayo, isikhathi semvula uwela ngoNovemba-Januwari, okuyizinto izinyanga enomoya. ezomile kakhulu futhi efudumele lapha esikhathini kusuka May kuya ku-July. Singapore - Asian yedolobha isimo. Kuyinto kokubili ezweni futhi inhloko-dolobha, futhi lesi siqhingi.
Lapho abantu bebuza bethi: "Singapore - inhloko-dolobha isimo," bafuna ukunikeza impendulo engcono, elikhanyayo, futhi okubaluleke kakhulu, ihlanzekile. Akukho ndawo emhlabeni ngeke ubone okufana ezitaladini ukugeza izindlu zihlanzekile. Garden City - okubizwa ngokuthi ngaphezulu kule ndawo ngenxa izimila yayo aluhlaza. Abanomoya sezulu esishisayo kunomthelela ekukhuleni kwayo, futhi abantu kwezomnotho ukuvikela imvelo yethu futhi banakekele wakhe.
By endleleni, abantu lapha Motley kakhulu. Iningi lena Chinese. Kodwa emzini futhi ungathola Arabhu, amaNdiya kanye omakhelwane Malay. Zonke sokuphila ngokuthula, kungani inkolo namasiko abizwa kwahlanganiswa, kodwa akakubangeli izingxabano nobudlova. ulimi Nachionalnym kuyinto isiMalay phakathi olusemthethweni futhi zihlanganisa i-English, Tamil futhi Putonghua.
Le ndawo kwegama efanayo isimo, ogama dolobha - Singapore, imayelana 630 amakhilomitha square. Lapha kuba kanye zone zezimboni, futhi zamabhizinisi, futhi acwebile zokulondolozwa kwemvelo. Ngokusho yetinsita Malay, once upon a time umbusi Sumatran nibhekane nazo kulolu ingonyama nganquma atholakala endaweni ogama lakhe lisho ukuthi "Lion City".
Uma ufuna ukuvakashela ezikhangayo best, siqala ukuya mfula. Ibanga yonkana ngumgogodla naseningizimu balesi siqhingi futhi agelezela olwandle. Umfula idume ngobuhle bakhe, namandla. Umsunguli yedolobha lanamuhla Stamford Raffles eyakhelwe port ukuhweba lapha, owokuqala kuleli zwe, futhi lesi sakhiwo futhi umzimba abadumile yamanzi.
Singapore - inhloko-dolobha kuliphi izwe? Lapho okuvikela imvelo. Ngisho emfuleni kuyiswe kumagugu esizwe abantu. Izakhamuzi ngenjabulo uyibonise izivakashi, uyaziqhenya ukuhamba kule ndawo yokugibela imikhumbi, ababiziweyo ukukhangana main langakubo.
Kukhona izikhumbuzo komlando, etshela izivakashi mayelana esidlule yezwe, ngomsuka wayo kazwelonke. Uma silambile, fed labapheki okumnandi professional zokudla, okuyinto ngomfula kakhulu ngendlela amakhowe ngemuva kwemvula. Wayehlezi yokudlela ethokomele kanye kokulinambitha izinhlanzi amakhono, ungakwazi ukujabulela crystal emfuleni ecacile futhi izibani ntambama ukuvakasha wakhe ngobuhlanya enhle.
Itholakala inhliziyo edolobheni. Yakhelwe ngokuvumelana nemithetho Feng Shui, lo mthombo kuyinto eyingqopha futhi ingxenye "Suntec City" - shopping centre enkulu. Emuva ngo-1998 yabhaliswa esikhathini Guinness Book of Records njengoba emthonjeni omkhulu futhi voluminous kakhulu emhlabeni.
Inhloko-dolobha isimo Singapore okunimangaze njalo ngokunemba imiklamo kunencazelo ejulile ayeyabelwe abakhi. Isiphethu Ingcebo iyathinteka. Yena - lepilo futhi ingcebo yawo engokomoya. Made in ngendlela indandatho lethusi kubonisa ubunye, ubuzalwane futhi ukulingana kwabo bonke abantu emhlabeni. Iphinde lifanekisela umkhathi wethu, ukuvumelana kwalo okuphelele kuze kube phakade.
Abantu bendawo bakholelwa ukuthi ngosizo emthonjeni ngempela ungathola ocebile. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwenza isiko. Siqukethe kulokhu okulandelayo: ukwakhiwa inezingxenye ezimbili: esikhulu (yangaphandle) nabancane (kwangaphakathi). Iningi abakhubazekile ngosuku izikhathi eziningana. Ngalesi sikhathi udinga ukusebenzisa somfula encane Lomthombo esebeké isandla sakhe emanzini ecabanga njalo mayelana igolide nemali zungeza ezintathu izikhathi. Yilapho uqiniseka ukuceba futhi bajabule. Lokho dolobha engavamile futhi kancane ukuzikhohlisa okunjalo weRiphabhulikhi Singapore, ogama abakhileyo basakholelwa inganekwane.
Isiqiwu sezilwane e Singapore
Lokhu menagerie - omunye the best kakhulu emhlabeni. Singapore - inhloko-dolobha kuliphi izwe? States kabani izakhamizi ayisivikelo yezimila nezilwane ezihlukahlukene futhi bathande kwabafowabo. I zoo, okuyinto basakaza phezu 28 esingamahektare, ekhaya ukuze 3 million izilwane, izilwane eziphila emanzini nasezweni, izinyoni nezinhlanzi. Kulokhu, izilwane ayivaliwe kumaseli, bahlala ukuphila okuvamile phakathi ezishisayo zasendle. kuyingozi ikakhulukazi kubantu hhayi azungeze Izinsimbi namabhodlela izindonga ukuze sivikele abasebenzisi ekuhlaselweni by eziyingozi.
Ethandwa kakhulu othandekayo izakhamuzi zoo - a behemoths hulking and giraffe eside-ezinemilenze, ezingavamile amahlosi ezimhlophe namabhubesi shaggy, izintshe izinyamazane ongaqondakali futhi ngomusa, wezinkawu beshesha futhi izinyoni ngitshiyoza. Zonke zitholakala izibaya ekhethekile wadala engokwemvelo kakhulu futhi obujwayelekile endaweni yazo. "Chip" zoo - "ubusuku safari". Lokhu tram, ovuthayo ngu unyezi yokufakelwa, okuyinto Rolls izivakashi yamuva sezindlela zoo.
Ingabe igama aquarium, okuyinto wavakashela yizivakashi. Singapore - Asian yedolobha isimo - kungaba ozibongayo omunye izikhungo ngobukhulu futhi ohahela isikhundla kakhulu sogu lolwandle elise-East. Lapha ungakwazi ukubona cishe 3000 abameleli izwe ngaphansi kwamanzi ezihlukahlukene zezinto eziphilayo, inani esikwaziyo sibalo 250.
umklamo aquarium kuyinto engavamile kakhulu. Izivakashi lihamba ku ithrekhi ekhethekile futhi kungasisiza sinqobe emhubheni eside. Uma lokhu laliphezu kwabo, esinxeleni nakwesokudla iflothi oshaka imisebe, izikole ezinkulu nezincane zezinhlanzi letingemasayizi lahlukene. Kodwa abakwazi kuphela ukubukela, ngisho ukuyithinta. Kuze kube yimanje, maphakathi ukuhlela indawo ekhethekile - kuleli gumbi engangikulo. Futhi lapha ifakwe ikamelo ngokuthi "Dolphin Lagoon", lapho uzoba isibukeli of yaseshashalazini kwalezi zilwane zasolwandle lovely futhi zihlakaniphile. Ngaphansi kokuqondisa nomqeqeshi kungenza ukubhukuda ngisho nabo niziklabise izinhlanzi awukudla.
Singapore - inhloko-dolobha kuliphi izwe? Lokhu, lapho bonke abantu sebethanda uNkulunkulu omkhulu kakhulu. Enye Luhambo kule irekhodi waba ngaphezulu ukuthi izwe alikho nje. Lokhu isondo Ferris, okuphakama kwawo - okuningi njengoba 165 amamitha. I ububanzi we Umbuthano 150 amamitha.
Isimanga ekhungathekisayo ubuchwepheshe lakhiwa ngo-2008. With ukuphakama ukunikela umbono omangalisayo ngempela lonke idolobha, ungakwazi ukuzitholela iso futhi iziqhingi eziseduze yezwe, lapho emadolobheni amakhulu ase-Singapore, kanye emaphethelweni emazweni angomakhelwane - eMalaysia nase-Indonesia.
Ukuze Roll bese nijabula, ubhekene nakakhulu phakamisa ngokwabo kwemizwelo yezitolo kakhulu. Izitolo nezindawo zokudla zinama egumbini esibulalayo, elakhiwa wonke isakhiwo ukukhangana. ezithakazelisayo kakhulu ukuthi ekuqaleni isondo uzungeza ngokumelene ukunyakaza iwashi, kodwa ke yashintsha, uvumela nemithetho eyintandokazi efanayo Feng Shui-Chinese.
Universal Studios futhi epaki "Merlion"
Lezi izindawo ezimbili oyintandokazi kakhulu izivakashi. Universal Studios - kwekulu ipaki. Okunjalo ozibona zonke zaseNingizimu-mpumalanga Asia. Kulapha ungakwazi ukugibela ngumoya ku aphakeme futhi ende kunazo zonke emhlabeni ka double iyaguquguquka. Kutholwe ensimini ka zone, sasibizwa ngokuthi 'Hollywood' - ikhophi elincane yayo "mfowethu big" eLos Angeles.
Kepha epaki, "Merlion", iyindawo lusetshenziswa ukuzilibazisa ongaphandle kuwo wonke izivakashi kanye bendawo. Lapha kulapho esifanekisweni bengonyama ulwandle - uphawu sabo enkabeni yedolobha bakhangisa lonke izwe. ukuphakama kwalo imayelana 9 amamitha, isisindo - amathani 70. Izigidi zabantu ukuza lapha nje ukuthatha isithombe ingonyama abadumile. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi zihlala ngaphandle futhi ujabulele ebusuku besibhakabhaka esinezinkanyezi nokucula izinyoni kuleli paki. Kanti inikeza umbono omuhle we Singapore River, amanzi alo ezijulile futhi crystal ecacile. Baningi amathilomu kuleli paki anikele anhlobonhlobo izitsha esihlwabusayo iziphuzo aqabulayo.
National Orchid Garden and Gardens ngu-Bay
Njengoba ubona, Singapore - idolobha oluhlaza kakhulu. Kukhona izingcezu eziningi komhlaba ubuhle bayo acwebile, lapho imvelo ibonisa ukuthi ingcebo yakhe eningi nokuphana. Ngokwesibonelo, Orchid Garden - indawo etholakala egqumeni eliphakeme of engadini Botanical. Lona omunye ekhangayo kuleli zwe elincane ukuthi uthanda konke enkulu. Lapha ungakwazi ukubona izinkulungwane 60 izinhlobonhlobo orchid, nzalo ecishe ibe yizinkulungwane 2 ukuthi imbali. Lesi siqiwu ihlukaniswe yaba izingxenye 4, ngamunye okuyinto thematic futhi zabonisa lokho isikhathi esithile sonyaka. Esikhathini indawo entwasahlobo sikhule orchid shades yegolide ehlobo - pink and red, ebusika - isitshalo cool, umbala okhanyayo ekwindla - konke ndawonye. Ama-orchid kungaba useyanuka, thinta bese ukuthatha izithombe kodwa likhiphe akuvumelekile. Le mbali - uphawu yezwe futhi ivikelwe umthetho.
Gardens ngu-Bay - a eziyinkimbinkimbi zokugcina ezimbili, ezimila 220.000 kwezinhlobo ezahlukene yezimila. Okwavelela kule ndawo - izihlahla ezinkulu ezenza umklamo ihlathi. Lolu Phiko 18 ukubaza giant, okuyizindawo umhlobiso epaki, uzibophe web ongabonakali zezitshalo emhlabeni wonke. Nayi-ke - Singapore. Ulwazi mayelana edolobheni futhi yayo ezindaweni eziluhlaza akugcini izindawo ezingaphezulu-okuthiwa. Zonke amapaki, izindawo zokugcina izithombo namasimu izingadi ahlelwe akunakwenzeka.
Umuzi-lizwe zokungcebeleka eziningi lapho ungakwazi uzibixe yesihlabathi ugxumela ulwandle efudumele. Ethandwa kakhulu phakathi izivakashi yokufakelwa lolwandle "Palawan". On endaweni yayo itholakala eseningizimu yaleli zwekazi. Kukhona ekhethekile ongakasetshenzwa observation emphemeni, okuyinto ufisa ubunyoninco umugqa Ngokuphambene umkhathizwe ohlanganisa kolwandle nesibhakabhaka. "Palawan" uphelele eziphumulele nomndeni wonke. Izingane ngeke be bored lapha: eziningi kwemizwelo futhi ezikhangayo futhi insimu yalo ngeke ngizishiye ngabandayo.
Enye famous beach - "Silos" - indawo engcono kakhulu ezemidlalo nokuzijabulisa. Uyabathanda ukuza lapha abantu iningi lawo kungabazalwane abasebasha, ngoba ngaphezu zokudlala amageyimu ezihlukile, bese zakha izindawo eziningi zokuzijabulisa: ema-disco, zokudlela kanye kuma-nightclub. Kukhona ithandwa - indiza ezintanjeni ezingeni ukuphakama 72 metres. Abalandeli yokuzilibazisa esinomsindo nightlife uzothola injabulo enkulu lapho ngiphawula eziphumulele ogwini, "Solid".
E Singapore, awukwazi kuphela abanalo, kodwa futhi uyozuza ngokomoya. Fans of lesi sitayela wokuphila kanye isiqondiso yezokuvakasha kufanele kuqala uvakashele yaseshashalazini "Esplanade". Baningi amakamelo izikhombisi-ndlela ezahlukene zobuciko eyenzelwe izinkulungwane izindawo. I Dome is ezenziwe ngengilazi elikuvumela ukuba ujabulele esibhakabhakeni ebusuku, futhi ukusebenza ngesikhathi esifanayo.
Enye indawo ezithakazelisayo - kuyinto eNational Museum of Singapore. ziphephile zayo ukukhombisa umlando waleli zwe nabakhileyo kuwo. Manje lapha akhokhiswa angaphezu kweshumi nambili zobuciko eyigugu kakhulu, okuyinto edonsela Ifana nozibuthe, Ongoti abavela emhlabeni jikelele. Kuyinto ipharadesi langempela ngoba aesthetes.
Enye Museum onguchwepheshe ubuciko, ikhombisa imisebenzi abaculi abadumile kusukela wonke amagumbi Earth. Lapha babuthana ukuqoqwa ephelele kakhulu yobuciko Asian kwekhulu lamashumi amabili, okunje ngeke ubone ikuphi. Museum ine ihholo elalinikezelwe ebhayisikobho, ochwepheshe ngezikhathi ukuqhuba ukuqeqeshwa naleto master emakilasini.
Okunye izikhangibavakashi Singapore
Lo muzi-isimo namanje eziningi izindawo ababezobahambela. Lena amathempeli ezahlukene maphakathi kanye nezifunda, efanekisela isiko emazweni angomakhelwane. Bayoba ukudalula kuwe izici of umoya kazwelonke, umlando kanye namasiko abantu.
Ikhishi - omunye Luhambo yase-Singapore. Yena imelelwa kwasolwandle kanye sushi. Kodwa isidlo ozithandayo kakhulu zendawo izivakashi kukhona anchovies, zihambisana banana leaf futhi ikhukhamba nge Chili unamathisele, inyama lukakhukhunathi amaqanda ngiyocasha. Phakathi iziphuzo kungenziwa itiye clove nobisi lukakhukhunathi, ayoliswe isitashi oluhlaza, ubhontshisi obomvu kanye brown sugar kuphawulwe. Strange, kodwa ezihlwabusayo kakhulu.
Kafushane, tshela konke ezithakazelisayo ukuthi zingatholakala kuleli zwe, akunakwenzeka. Kodwa njengoba sengike lapha okungenani kanye, uzokwazi ukuphendula ngokuzethemba lo mbuzo: "? Singapore - inhloko-dolobha isimo" Manje uyazi ukuthi izwe elincane elisempumalanga ivame ukuba wonke giant. ESingapore, umlando, ulimi, ulwandle, isiko kanye nohlobo okuyizinto ezikhangayo, nhlobo futhi amahle - lokhu ingenye yezindawo best emhlabeni, futhi kubalulekile ngokuvakashela okungenani kanye ezimpilweni zabo.
Birch - idolobha elisezweni lase-Brest esifundeni. Yini ukubona, lapho ukuhlala
Sundeck - isiqhingi wenduduzo nokungcebeleka
Loire - umfula eFrance: incazelo, incazelo